Luis Enrique oo xalay ku xanaaqay ciyaartoydiisa waqtigii nasashada – Gool FM
Luis Enrique oo xalay ku xanaaqay ciyaartoydiisa waqtigii nasashada
Liibaan Fantastic October 3, 2016
(Barcelona) 03 Okt 2016 Wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique uu ku xanaaqay ciyaartoydiisa waqtigii nasashada markaas oo Celta Vigo ay ku hogaaminaysay 3-0.
Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in Luis Enrique uu caro kala dul dhacay ciyaartoydiisa kadib 3-gool oo laga dhaliyay qaybtii hore, wuxuuna ka codsaday inay horay u dhaqaaqaan oo ay kubadda si fudud isugu dhiibaan qaybta dambe.
Sidoo kale Luis Enrique ayaa u sheegay ciyaartoydiisa inaysan kubadda ku hor qaldin goolhaye Ter Stegen si Celta Vigo aysan ugu ciqaabin qaladkooda.
Wargayska ayaa intaa ku daray in Luis Enrique uu sidoo kale ka codsaday ciyaartoydiisa inay waajib ku tahay inay gool dhaqso ah dhaliyaan marka ay bilaabato qaybta dambe ee ciyaarta taas oo keentay in Barcelona ay 3-2 ka dhigto.
Ugu danbayntii Barcelona ayeey soo gaartay guul daro xanuun badan kadib markii laga dhaliyay goolkii 4-aad oo qaladkiisa uu iska lahaa goolhaye Ter Stegen.
RASMI: Swansea City oo iska cayrisay tababare Francesco Guidolin isla markaana magacaawday tababare kale
Zidane waxba ma dhaamo Rafa Benitez (WARBIXIN)